August 2012 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... မေးထားတဲ့ အမတစ်ယောက်ရှိလို့ အခြားမသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ပထမဆုံး မိမိဖျက်လိုတဲ့ အကောင့်ဖြင့် Facebook ကိုဝင်ပါ... ပြီးရင်အောက်မှာ ပုံလေးတွေနှင့် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တဆင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... IDM 6.12 Build 12 Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 12 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Microsoft Office Professional Plus 2013 အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ထွက်တာတော့ ကြာပါပြီ အခုမှပဲတင်ဖြစ်တာပါ.. Software ကတော့ မူရင်းလင့်တွေကို ပေးထားပြီး serail keys ကိုတော့ Mediafire မှာ တင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Hard Disk အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်း၊ Hard Disk ပျက်ရခြင်းအကြောင်းနှင့် စမ်းသပ်ပုံများ၊ Hard Disk ပျက်ရခြင်းအကြောင်းကို သရုပ်ခွဲလေ့လာမယ်
Hard Drive ဆိုသည်မှာ
Hard Disk Drive သည် Non Volatile Disk Drive တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းထဲရှိ အကြောင်းအရာများကို အသုံး ပြုသူ User က မဖျက်သရွေ့တည်ရှိနေတတ်သည်။ Hard Disk ကို Non Volatile Storage Device အုပ်စုထံမှ Primary Storage Device ဟုလည်းခေါ်သည်။ HardDisk သည် ၄င်းထံရောက်ရှိလာသော Data များကို Digitally Encoted လုပ်ပြီး Magnetic Coded လုပ်ထားသော သံ လိုက်ရည် Platters များပေါ်၌ သိမ်းဆည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပျူတာ system, performance တွေကို ပိုမိုချော့မွေ့ ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ tools ပေါင်း 30 ကျော်ပါဝင်ပြီး error များကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့ Advanced System Optimizer လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ junk file cleaner, memory optimizer, system information, system files backup, file encryption, safe uninstaller, duplicate file finder, windows transparency manager စသည်တို့အပြင် RAM cleaning, Registry erro နှင့် မလိုအပ်တော့တဲ့ system ဖိုင်များကို ရှင်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်.. သူရဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်အောင် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Funny Photo Maker လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Facebook မှာပုံတင်ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်တော့ အသုံးဝင်တဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်... Funny ပုံလေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ပါတယ်... အောက်မှာလည်း နမူနာပုံအနည်းငယ်ဖော်ပြပေးထားပြီး serial key, crack မလိုပါဘူး အမြဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Music နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀ါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်အောင် AudioMulch တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အသံတွေကို ချိန်ညှိချင်ခြင်း ကောင်းမွန်စီလျှော်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်... အသံလေးတွေကို သီကုံးဖို့အတွက် Music သမားတွေအသုံးပြုတဲ့ အသံချိန်ညှိတဲ့ mixer software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲတန်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack ထည့်ပေးထားပြီး Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Icon တွေကို editing and creation လုပ်လို့ရတဲ့ IconCool Studio Pro လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Icon တွေတင်မဟုတ်ပါဘူး အခြား Photo တွေကိုပါ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Icon လေးတွေဖန်တီးရးစွဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပိုသင့်လျှော်ပါတယ်... effect နှင့် filters စတာတွေကိုအသုံးပြုပြီး စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ crack ထည့်ပေးထားပြီး Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
IconCool Studio includes all icon editing tools , as well asavariety of filters and effects that can be used to enhance your icon designs. The included IconCool Mixer enables you to create custom icons from scratch, using multiple layers andavariety of ready-to-use design elements.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ... တင်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ Any DVD Converter Professional Update လေးပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Converter ထဲမှာ နာမည်ရလာတဲ့ Converter တစ်မျိုးပါ သုံးရတာလွယ်ကူရိုးရှင်းသလို Apple Products, Android Products, Sony Products, Video Files, Audio Files ဆိုပြီး လွယ်ကူအောင် အုပ်စုလေးတွေခွဲပေးထားလို့ အသုံးပြုသူတွေကြိုက်နှစ်သက်စေပါတယ်... Burning video to DVD or AVCHD DVD စနစ်ထည့်ပေးထားလို့ convert လုပ်ပြီး ခွေအလွယ်တကူ Burn နိုင်ပါတယ်... အွန်လိုင်းပေါ်က ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်း ဒီကောင်လေးအပေါ်ကနေ Download ယူရင်း Convert လုပ်နိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Keymaker ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... Minus, Mediafier နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးတဲ့ ကွန်ပြူတာရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြန်ဆန်အောင်မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Auslogics BoostSpeed လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီကောင်လေးမှာတော့ Speed Up Internet System ပါဝင်ပြီး 1-Click Scan, System Advisor, Disk Defrag 3, Over 15 tools, File Recovery စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပါ ထည့်ပေးထားလို့ ကွန်ပြူတာကို မြန်ဆန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အင်တာနက် speed ကိုပါမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်... သူ့ရဲ့ Features တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် အခြားလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကိုတော့ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကျွန်တော်အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Format Factory ကို update လေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Window အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်သလို download ယူလို့လည်းရပါတယ်... ကျွန်တော်ကတော့ Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Partition ခွဲချင်ပေါင်းချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် MiniTool Partition Wizard Profession ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Windows 2000, XP, Vista, Windows7and Windows 8 တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သုံဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်.. အသုံးပြုပုံနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိလိုလျှင် Home page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.65.0.1000 Beta (သုံးကြည့်ပေးပါ)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Malware တွေကို အကောင်းဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Malwarebytes Anti-Malware (Pro) လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တစ်ခုပြောပြချင်တာက Antivirus တစ်မျိုးမျိုးတင်ထားရင် လုံလောက်တယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ... ယခုကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ Kaspersky Internet Security 2013 တင်ထားပါတယ် SUPERAntiSpyware တင်ထားပါတယ်... အခုထပ်ပြီး Malwarebytes Anti-Malware တင်လိုက်ပါတယ်... သိစေချင်တာက သုံးမျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတာကိုပါ... FB မှာလည်းသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မေးထားပါတယ်... Antivirus နဲ့ AntiSpyware နှစ်မျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ရလားတဲ့... တင်သုံလို့ရယုံတင်မဟုတ်ပါဘူး တင်သုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဆိုတာ ဆိုက်ပေါင်းစုံ ၀င်ကြတာများပါတယ်... FB မှာလည်းလင့်တွေက အမျိုးမျိုးစုံရှယ်နေကြတာပါ... ကျွန်တော်တို့လိုပြန်လည်ဝေမျှနေတဲ့သူတွေဆို ပိုဂရုစိုက်ရပါတယ် Software တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီး Full version အဆင်ပြေတယ်ဆိုကာမှ Virus, Malware တွေစစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် Upload ပြန်တင်ပေးတာပါ... အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Malwarebytes Anti-Malware လေးကိုသုံးကြည့်ပေးပါ Pro ဖြစ်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်.... မိမိစက်မှာ တွယ်ကပ်နေတဲ့ Malware တွေနဲ့ တစ်ချို့ဆိုက်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ Malware တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်... Malware ရှိနေတဲ့ဆိုက်တွေကို ၀င်မိရင်ရှိကြောင်းကို ညာဘက်အာက်ခြေနားမှာ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်... ဒီကောင်လေး တင်ပြီးသွားရင်လည်း Update ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးပါ... Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... IDM 6.12 Build 11 Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ် .... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 11 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Mediafire, (2) နေရာတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
ကိုယ့် web browser မှာ do-not-track ပါရဲ့ လား .....
Microsoft ကဖြန့် ချိမယ့် windows 8 မှာပါဝင်မယ့် Internet Explorer(IE) 10 မှာ do-not-track function ပါဝင်မယ်လို့ confirm လုပ်ထားပြီးချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဖူးလို့ ဆိုလာတဲ့အတွက် Mircosoft ဘက် ကဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ မူရင်း ကတော့ ဒီမှာ ပါ။
Do-not-track ဆိုတာကတော့ အင်တာနက်သုံးတဲ့ http protocol ကနေ user တွေဘာသုံးနေလဲ... ဘယ်လို activity တွေ၇ှိလဲဆိုတာကို online ကနေ စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ features ကိုပိတ်ထားနိုင်တာပါ။ကြော်ငြာ companay တွေနဲ့ Web Analytic Company တွေကတော့ သူတို့ ဟာ user တွေရဲ့ data တွေကို track လုပ်ပြီး ကြော်ငြာနဲ့ web analytic လုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft ကို ဒီ features ကို မသုံးစေချင်ကြပါဘူး။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Windows 8 အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်အဆင်ပြေမယ့် Start Menu Х လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ပုံမှာပြထားသလိုပါပဲခင်ဗျာ... ဒါလေးကို Windows7or 8, Vista, XP (32 and 64 bit) တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... အရင်ကလည်း How to getawindows7start menu in windows 8 ဆိုပြီး ဒီနေရာ မှာတင်ပေးဖူးပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်.... Mediafire, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
One of the main changes in Windows 8 is the new metro UI or the modern UI start screen and it completely replaces the old classic style start menu. While many like the new start screen, there has been constant complaints from people that the new start screen is best only on touch screen tablets and not suitable for desktop. While many developers created apps to skip the start screen, most of them do not work on Windows 8 RTM.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Windows ရဲ့ Admin Password ကို CD တစ်ချပ်နဲ့ လွယ်ကူစွာဖောက်နိုင်နဲ့ Software လေးပါကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် Blog မှာ မတင်ပေးရသေးပါဘူး။ ဒါလေးကို ဘော်ဒါကြီးဖြစ်တဲ့ Pyae Phyo(MMiTD) ကနေမလာခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Version လေးဖြစ်ပြီး Window XP ,7, Vista , 2008 , 2003 , 2000 အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ RAR လေးကိုဖြည်လိုက်ရင် ISO ဖိုင်လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါလေးကို Nero နဲ့ဖြစ်ဖြစ် အခြား ISO software နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Burn လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် အခွေလေးကို ထည့်ပြီး Computer ကို Restart ချလိုက်ပါ။ ၀င်းဒိုးတင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း First Boot ကို CD Rom ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သူညွန်ကြားတဲ့ အဆင့်တိုင်းလိုက်လုပ်ရုံပါဘဲ အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။ Mediafire, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Kaspersky Keys for All Product Kaspersky (28/08/2012)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspar key လေးတွေ အသစ်ရလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Kasparsky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire download Minus download အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ key ကိုတော့ Mediafire, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားကပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...ကျွန်တော် နည်းပညာစာအုပ်တွေကို Mediafire လင့်အသစ်နဲ့ တင်ထားတာလေးနှင့် Minus မှာတင်ထားတာလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်... အရင်ကလည်း ကျွန်တော့် blog မှာ နည်းပညာစာအုပ်များ (104) ဆိုပြီးတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်... အွန်လိုင်းမှာတော့ (103) အုပ်ဆိုပြီး သိတာများပါတယ်... အခုဟာက ပိုများမယ်ထင်ပါတယ်... ခေါင်းစဉ်ပဲဖော်ပြပေးထားတာဆိုတော့ တစ်ချို့ နားလည်ချင်မှ နားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်... တကယ်တန်းအမှန်က ဒီစာအုပ်တွေကို မာတိကာ၊ ရေးသားပြုစုသူ၊ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာအကျဉ်း၊ မျက်နှာဖုံးပုံတွေနှင့်တကွ တအုပ်ခြင်းဖော်ပြပေးသင့်တာပါ... ဒါမှလည်း ဒေါင်းလော့ယူမည့်သူက မယူခင် စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာတွေကို တိတိကျကျ သိရှိနိုင်မှာပါ... ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းအတိုင်းအတာနှင့် မြန်မာပြည်ကွန်နရှင်အခြေအနေကြောင့် လက်ရှော့ထားရပါတယ်... အရင်တခါတင်ပေးလိုက်တာ နည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း (104) အုပ်က Mediafire နှင့် Jumbofiles လင့်တွေပါ... အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ လင့်တွေလည်းရှိပါတယ်... အခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမတော့ အေးဆေးမှ တင်ပေးမလို့ပါ... အကိုတစ်ယောက်လိုအပ်လို့ FB မှာ တင်ပေးရင်းကနေ တင်ဖြစ်သွားတာပါ... ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့လင့်တွေမှာ ရိုက်ပြီးသားထပ်နေတာတွေလည်း ပါပါတယ် သည်းခံပြီးဖတ်ပေးပါ... တစ်ချို့စာအုပ်တွေဆိုလည်း နှစ်ခါ သုံးခါ ပြန်ပြန်တင်မိလို့ လင့်နှစ်ခု သုံးခု ပါပါတယ်... အမြင်မတော်လို့ ပြင်စင်ပြီး ပြန်ရှယ်မည်ဆိုလည်း ရပါတယ်ခင်ဗျာ... အဆင်ပြေသလို လုပ်နိုင်ပါတယ်... အခုရေးသားတဲ့ Post ကိုတော့ သည်းခံဖတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ ထပ်နေတာတွေလည်းပါပါတယ်.... အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒါလေးကတော့ Designer သမားတွေ၊ ပုံကောင်းကောင်းလေး လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် SNS-HDR Pro လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ပုံရဲ့ကာလာအရေအသွေးကို အသုံပြုသူ စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိပေးနိုင်ပြီး ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးကို ပြောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်... စမ်းသုံးကြည့်လိုက်မှ သိသိသာသာ ကာလာအရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်ချောမွေ့လာတာတွေ့ရပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ 32 နှင့် 64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် crack ထည့်ပေးထားပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပြီး Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီကောင်လေးက အင်တာနက် ကန့်သတ်ပေးတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်... အင်တာနက်ကွန်နရှင်ကို Timer ပေးထားခြင်း၊ အသုံးမပြုစေလိုတဲ့ websites တွေကို ပိတ်ထားခြင်း၊ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ website များသာ ဖွင့်စေနိုင်ခြင်း၊ ကွန်နရှင်ထိန်းချုပ်ပေးထားခြင်း၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်တာနက် Limits သာအသုံးပြုစေခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Japan အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သုံးနေတဲ့ဖုန်းထဲမှာ Loozfon Trojan တစ်မျိုး ကို symantec မှ Network Security သုတေသီတွေ တွေ့ ရှိပြီးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ Trojan ဟာ Information တွေ ( ဖုန်း(သို့ ) tablet တွေကအချက်အလက်တွေအားလုံးကို) ခိုးယူနိုင်စွမ်းရှိပြီးမကြာသေးခင်ကမှ Symantec ကထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ( Symantec ကတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်း နာမည်ကြီး Norton Antivirus ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ Company ဖြစ်ပါတယ်။ )
windows တွင် blue screenerror တက်ရင် ပေါ်သော code များကိုကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းခြင်း
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပြူတာ တွင် BSD (Blue Screen of Death) တက်ရခြင်း အကြောင်း ၁၀ ရပ် ကို ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ ဖော်ပြပေးဖူးပါတယ်... ဒါကတော့ erros တက်ရင်ပေါ်သော code များဖြစ်ပါတယ်... ဒီ code များကိုကြည့်ပြီး Blue windows တွင် blue screenerror တက်ရင် ပေါ်သောစာသားများကိုမှတ်ပြီး ဘယ် complement ကဘာ errors တက်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ဟာသပုံလေးတွေကိုလုပ် ခြင်တဲ့သူတွေဒီ Software လေးကိုသုံးစေခြင်တယ်ခင်ဗျာ ... နာမည်ကလဲ Funny Photo Maker ပါဗျာ အရမ်းကိုဟာသပုံတွေ လုပ်လုပ်ကောင်းမဲ့ပုပါဘဲ သုံးကြည်စေခြင်တယ် ကိုယ်ဘလော့မှာ ဟာသပုံတွေထားခြင်ရင်တော့ဒီ Software ကိုသုံးကြည်ပါ။ ဒါလေးက ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ အသစ်စက်စက်ကလေးဖြစ်တဲ့ (နည်းပညာ) ကိုချင်းလေး မှာတင်ထားတာလေး ကူးယူလာခဲ့ပါတယ်...
ဒါကတော့ PC speed up တစ်မျိုးပါ... Function တွေကတော့ speed up software တွေရဲ့ထုံစံအတိုင်းပါပဲ စမ်းသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများရှိရင် သုံးနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်အောင် serial key ထည့်းပေးထားပြီး Mediafire, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
PC Shower 2012 is power package All-in-one application for cleaning, tuning, optimizing and fixing PC errors for high performance more than other System utilities. PC Shower 2012 is the only application you need to clean, tune, optimize, and repair PC errors relating to hardware, operating system issues, and applications. With PC Shower 2012, you’ll unlock access to over 150 secret configuration and performance tweaks, all in justafew clicks of your mouse. Perfect for computer owners of all levels, from novices to power users, PC Shower 2012 offers intuitive help functions, recommendations, and registry fixes that improve performance across Windows XP, Vista, and Windows7systems. You can even take advantage of Desktop Locker to ensure that your private documents and files stay that way when you’re not at your PC.
ဒီ Process Lasso လေးက ကွန်ပျူတာရဲ့ CPU Speed ကိုမြန်ဆန်အောင် CPU ကို စွမ်းရည်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကွန်ပျူတာ Hang ခြင်း၊ Not Responding ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်... ဒါအပြင် မလိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ CPU အလုပ်လုပ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် CPU ကိုသက်သာစေပါတယ်... အမြဲတန်းအသုံးပြုနိုင်အောင် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Mediafire, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မနေ့က Advanced SystemCare6Betal 2.0 လေးကိုထွက်ထွက်ခြင်း serial key နှင့်တကွ တင်ပေးပြီးပါပြီ ... ဒီနေ့ထပ်မျှဝေပေးချင်တဲ့ software ကတော့ Ibite ကထုပ်တဲ့ RegOptimizer လေးပါ... တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် ဒါလေးလည်း ထပ်သုံးကြည့်ပေးပါ... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Mediafire, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
A powerful system optimizer for Windows stability and performance. RegOptimizer is an easy to use application that was designed in order to provide you withasimple means of enhancing the overall performance of your system.With this program you can eliminate unnecessary registry keys, invalid shortcuts, temporary and junk files as well as any trace of your computer activities and Internet traces.You can even use RegOptimizer to clean the RAM and optimize its usage for better performance.
တင်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ Advanced SystemCare6Betal 2.0 လေး ရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီ version မှာတော့ upgrade လုပ်ဖို့အတွက် key လိုလာပါပြီ download ဖိုင်ထဲမှာ key ထည့်ပေးထားပါတယ်... key ထည့်တဲ့အခါ internet ကိုဖြုတ်ထားပေးရပါတယ်.... ကွန်ပြူတာ ကျန်းမာရေးအတွက် System Utility ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ top စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်... လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ Malware removal, Regisity Fix, regisity Defrag, System Optimization, Startup Optimization, Shortcut Fix, Privacy Sweep, Junk files clean, Security Defense, Disk Scan, Vulnerability Fix, Disk Defragment စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်.... သူရဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
HD Video ပြောင်းချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ImTOO HD Video Converter လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
YouTube Video Downloader Pro တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Downloader ဆိုပေမယ့် video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ conveter နဲ့ player ပါထည့်ပေးထားပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
This Is Actually V3.9.0.2 PRO It's not the official Installer. It's A Custom Precracked Installer Created By Myself. Install and Have Fun ! YouTube Downloader is software that allows you to download videos from YouTube, Facebook, Google Video, Yahoo Video, and many others and convert them to other video formats. The program is easy to use, just specify the URL for the video you want to download and click the Ok button! It also allows you to convert downloaded videos for Ipod, Iphone, PSP, Cell Phone, Windows Media, XVid and MP3. You can use YouTube Downloader to download the videos of your choice from home, at the office or in school.
Barcamp Pyay 2012 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
Barcamp Pyay 2012 ကို ၂၅.၈.၂၀၁၂ နေ့ နံနက် ၉း၃၀ တွင် ပြည်မြို့၊ အထက(၁) ကျောင်း၌ ဖဲကြိုးဖြတ်၍ စတင်ဖွင့်လှပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဘားကမ့်ပြည် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား နံနက် ၉ နာရီခွဲ အချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည် ။ တတ်ရောက်သူ ဦးရေ ၃၅၀ ကျော် ခန့်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ Barcamp Pyay 2012 အခမ်းအနားဓါတ်ပုံများ လက်လှမ်းမှီသလောက် စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါသည်။
CCleaner အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
DVD ခွေမှတဆင့် Format ပြောင်းလို့ ရတဲ့ 1CLICK DVD Converter လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... DVD ခွေထဲက သီချင်းကို Mp4, phone စသည်ဖြင့်ထည့်ချင်ရင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ် အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
PDF ဖိုင်တွေမှာ ပေးထားတဲ့ password ကို ရှာပေးတဲ့ PDF Password Removal Software v7.0 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒါက update version ပါ.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
This software offersasolution for users who want to remove passwords from one or more PDF files. The user simply adds the required files or an entire folder before choosing the method: brute force or usingadictionary file. Brute force will guess at the password based onaspecified character set andaminimum/maximum number of characters that you specify. The dictionary option will guess at the password based on words listed inatext file chosen by the user. Using this time saving software, passwords can be removed from even large numbers of PDFs with one click.
Angry Birds Seasons 2.5.0 အသစ်ထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
အမြဲအသုံးပြုလို့ရအောင် crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး serial key ကိုတော့ ရိုက်ချင်တာရိုက်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်...
ထုံးစံအတိုင်း IDM 6.12 Build 10 Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ် .... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 10 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Mediafire, rghost.net (3) နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
Angry Birds Space 1.3.0 အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီတခါ Patch နှစ်မျိုး နဲ့ crack ထည့်ပေးထားပါတယ်...
ဒါလေးလည်း တင်ထားတာမရှိသေးလို့ Adobe Photoshop 7.0 တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မြန်မာဖောင့် လိုအပ်ရင်တော့ ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်....
Adobe PageMaker 7.0 ကျွန်တော့် Blog မှာတင်ထားတာမရှိသေးလို့ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများရှိရင် အသုံးပြုနိုင်အောင်တင်လိုက်တာပါ...
မြန်မာဖောင့် လိုအပ်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ တင်ထားပါတယ်....
PageMaker နဲ့ Photoshop မှာသုံးဖို့ Fonts လေးတွေကို တောင်းထားတဲ့ အမတစ်ယောက်ရှိလို့ ရှိတာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Art House Fonts, Shwe Theway, U4, Wininwa စတာတွေပါ ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မပါပါဘူး (44.2 Mb) ရှိပြီး Minus မှာတင်ထားပါတယ်...
အခြားလိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများရှိရင် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ်... ကွန်ပျူတာကို Lock လုပ်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် သုံးလို့အဆင်ပြေမယ့် WinLock Professional လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Ctrl + Esc, Right click စသည်ဖြင့် Lock လုပ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ဘာတွေ Lock လုပ်ပေးနိုင်လည်းဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
လွယ်လွယ်ကူကူ မျက်နှာဖြတ်ဆက်လို့ရတဲ့ Face Off Max လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အမြဲအသုံပြုနိုင်အောင် Patch + Keygen ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Patch နှင့် keygen အသုံးပြုမည်ဆိုပါက anitvirus ကို ပိတ်ထားပေးရပါတယ်...
TECHSPACE နည်းပညာဂျာနယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ညွှန်ပေးလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်....
FB ကအားလုံးသုံးနေကြလို့ FB လင့်လိုပဲ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်...
https://www.facebook.com/techspaceJournal ကို click ပြီးသွားလိုက်ပါ Direct Read ပေးထားတဲ့အပြင် Download ယူလို့လည်းရပါတယ်.....
avast! Internet Security 7.0.1466.549 Final + Trail Reset
avast သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် avast! Internet Security 7.0.1466.549 Final လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ထုံးစံအတိုင်း software နှင့် Trail Reset လင့်ခွဲတင်ပေးထားပြီး Minus မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...
PGWARE GameBoost 1.8.20.2012 + GameGain 2.8.20.2012 + PCBoost 4.8.20.2012
PGWARE ကထုပ်တဲ့ GameBooster, GameGain, PC Booster သုံးမျိုးစလုံးပေါင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး Patch အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Antispyware တင်ထားပါက ပိတ်ထားပေးရပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ငယ်ချင်းများအတွက် Jumbofiles, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်...
ကွန်ပျူတာမြန်ဆန်စေဖို့အတွက် speed up တစ်မျိုးရလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် windows အတက်ပါမြန်ဆန်စေပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုလို့ရအောင် Crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့ာလာနိုင်ပါတယ်... Minus, Jumbofiles နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
RegZooka scans your registry and removes files you don’t need, optimizes fragmented files, solves error messages like dll pop-ups and runtime errors.Because of the vast numbers of operating system configurations and errors, about 10% of the time your PC problem can’t be entirely solved on the first scan. This is true of all registry cleaners. RegZooka is unique because if that happens, you can simply call us at 1-800-290-9809 or send us an email at contact@zookaware.net, along withasimple report that RegZooka creates. One of our RegZooka specialists will analyze the problem on your PC and we will do one of the following for you:
Kaspersky Keys for All Product Kaspersky (21/08/2012)
Virus များကြောင့် File၊ Folder များပျောက်ဆုံးနေလျှင်
Troajn.Gauss.Spy.Gen Removal Tool 2.2.0.6 (x86/x64)